Imibono Yezithombe Ezi-8 Zokumaketha Ibhizinisi Lakho ku-Instagram | Martech Zone
Imibono Yezithombe Ezi-8 Zokumaketha Ibhizinisi Lakho ku-Instagram
NgoMgqibelo, Septhemba 5, 2015 NgoMgqibelo, Januwari 2, 2021 Douglas Karr
Njalo ngezikhathi ezithile, ngithola iseluleko esihle noma iseluleko esifushane engingathanda ukuhlanganyela nabanye emphakathini. Esikhundleni sokuvele ngiyithumele ku-tweet, ngivula ifayela le- Depositphotos uhlelo lokusebenza lweselula bese uthola isithombe esihle. Ngikunqamula ngisebenzisa i-iPhone yami bese ngiyivula kufayela le- Ngaphezulu kohlelo lokusebenza. Kungakapheli imizuzu eyi-10, nginesithombe esihle esingakhuthaza ezinye zazo Inethiwekhi yenkampani yethu ye-Instagram. Nasi isibonelo:
Ngabe lokho kuhlangana ngani nokwenza ukuthengisa kwenkampani yami? Ngithole kule minyaka edlule ukuthi amathuba namakhasimende amakhulu kakhulu afike ngenethiwekhi yethu, hhayi ngokukhuthaza ukungasebenzi.
I-Instagram yinethiwekhi yokuxhumana ebonwayo enikeza izindlela ezinhle kakhulu zokuvula impilo yami uqobo futhi ngiyabe ku-inthanethi. Ngibeka zonke izinhlobo zezithombe phezulu - kusuka ehhovisi lethu kuya kumakhasimende ethu, kuya enjeni yami… futhi yebo… ezinye izingcaphuno ezikhuthazayo phakathi. Asinabalandeli abaningi, kodwa sineqembu elikhulu labangane abathanda futhi babelane ngalokhu esikushicilelayo.
WithI-Hootsuite, futhi manje singahlela okuthunyelwe kwethu kwe-Instagram kuzithameli zethu! Ukuhlela izibuyekezo ze-Instagram kube ngempumelelo ikakhulukazi ekuhleleni ukukhushulwa kwamakhasimende ethu.
Ungalimaketha Kanjani Ibhizinisi Lakho ku-Instagram
Isihlahla Somphakathi hlanganisa le infographic emfushane ukukusiza ucabange ngemibono yezithombe namavidiyo ongawabelana ngawo ukukhulisa ulwazi ngomkhiqizo wakho nokwakha ubudlelwano emphakathini nezethameli zakho. Banikezela ngemibono eyisishiyagalombili yezithombe ongazisebenzisa ukumaketha ibhizinisi lakho ku-Instagram:
Khombisa imikhiqizo yakho (noma amaklayenti akho!)
Khombisa ukuthi imikhiqizo yakho yenziwa kanjani noma izinsizakalo zakho zihlinzekwa kanjani.
Khombisa lokho okungafezwa yimikhiqizo noma izinsizakalo zakho
Bukisa ngehhovisi lakho nabasebenzi
Yabelana ngemicimbi oya kuyo
Abelana izingcaphuno kanye ugqozi
Sebenzisa imincintiswano ukuthola abalandeli abasha
Vele, phansi komgwaqo ungashayela nokuguqulwa okuthile usebenzisa Inkinobho yokuthenga ka-Instagram!
Tags: imibono yesithombeUgqoziinstagramukumaketha kwe-instagramamavidiyo e-instagram